5 podcast zvinoshandiswa kudesktop yedu | Linux Vakapindwa muropa
5 podcast zvinoshandiswa kudesktop yedu
Joaquin Garcia | | Multimedia, Zvirongwa
Podcasts ave akakurumbira kwazvo, kusvika padanho rekuti bhizimusi hombe rakagadzirwa rakatenderedza chigadzirwa chemultimedia ichi. Izvi zvakatungamira vazhinji vanogadzira kuti vagadzire akasarudzika mapurogiramu kana mabasa anobatana neepodcast repositories kuitira kuti vateerere kune aya mafaera odhiyo.
Kune akawanda mapurogiramu anokwanisa kutamba mafaira epodcast, zvirinani zvese sezvo tisingafanire kukanganwa kuti podcast ndezvokurekodha zvakarekodhwa. Asi mamwe mapurogiramu ari nani pane mamwe pakuteerera aya marudzi emafaira. Tevere isu tichataura nezvazvo iwo mashanu akanakisa mapurogiramu ekuteerera podcasts kubva kune yedu Gnu / Linux desktop.
1 Amarok / Rhythmbox
4 Gnome Podcasts
Amarok / Rhythmbox
Chinyakare zvikumbiro zvekuteerera kumimhanzi zvine chikamu chavo chekutamba podcast Amarok uye Rhythmbox kwete chete kutamba podcast asiwo sync pamwe podcast feed kero, dzifambirane pasi uye kukopa ekuteerera mafaira edu ekunyoreswa kwepodcast. Kana isu tatova nechero cheaya mafomu akaisirwa, inogona kunge iri sarudzo yakanakisa yekuteerera podcast, zvirinani kana zvatinoda zvisina kunyanya kukwirira.
gPodder chishandiso chekare asi chine simba uye chinoshanda. gPodder inoshanda chete nemafaira epodcast, ndiko kuti, hatizokwanise kurodha mumhanzi kana mafaera ekuteerera asi isu tinogona chete kugadzirisa podcast uye nekudaro isu tinozobvunzwa iyo podcast feed. gPodder chishandiso chakasimba chinoshandisa mashoma masosi uye chakagadziriswa pakushanda kwedesktop.
LPlayer mutambi wechiSpanish mavambo ayo anotarisisa kuve minimalist mumhanzi mutambi asiwo inoenderana nepodcast. Nekudaro, neLPlayer tichava neyakareruka uye ine simba nzira kune zvirongwa zvakaita seAmarok kana Clementine. LPlayer inogona kuwanikwa kuburikidza neizvi link.
Gnome Podcasts kana Podcasts ndiko kushandiswa kweiyo Gnome chirongwa chekutarisira nekutamba podcast. Iwo akanaka mapoinzi kusangana kwayo neGnome uye mukana wekuteerera podcast pasina kurodha pasi kubva kumidziyo. Kupesana neiyo kusabatana kuenderana nemamwe madafura akadai sePlasma kana LXQt.
Podfox mutambi wepodcast kuburikidza neiyo terminal. Haasi munhu wese anoshandisa tafura, vazhinji vanoshandisa iyo terminal kune avo akajairwa mabasa. podfox ndeimwe yeaya maturusi ayo kubudikidza neiyo terminal anotibvumidza kutamba mafaera ekuteerera, sync podcasts uye wedzera chikafu kune edu podcast zvinyorwa. Iko kusarudzika kugona kwako kwakashata kwekutsvaga podcast kuburikidza neepodcast zvitoro kana zvinyorwa.
Aya ma5 podcast anoratidza akakosha uye anowanikwa mune chero chinhu chekuchengetera chero kugoverwa kweGnu / Linux, asi havazi ivo voga. Usakanganwa kuti ma podcast ndiwo mafaira eodhiyo uye izvo zvinoita kuti chero midhiya kana mutambi wemimhanzi akwanise kutamba iyi faira, kunyangwe zvisingashande pamwe nezvirongwa izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » 5 podcast zvinoshandiswa kudesktop yedu
Valve inogona kuburitsa yazvino 64-bit vhezheni yeiyo Steam mutengi paLinux